Rose Garden HotelWine and Cheese Soirée (17th August, Thursday) | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစား စကိတ်ဘုတ်များ ပြင်ပအားကစား ဘတ်စကတ်ဘော ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းအကြီးများ အားကစားပစ္စည်းအသေးများ အားကစားအ၀တ်အထည်များ အားကစားအသုံးပြုပစ္စည်းများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ Entertainment Rose Garden Hotel Wine and Cheese Soirée (17th August, Thursday) Rose Garden Hotel Wine and Cheese Soirée (17th August, Thursday)By Rose Garden Hotel (2) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများWine and Cheese SoiréeDate : Thursday 17th August 2017Time : 6pm - 9pmPlace : Veranda BarCall 01-544434, 09970140004 if you find any difficulties in placing orderFree Delivery all over Myanmar! Ks 26,600 Ks 33,600 -21% ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Rose Garden Hotel ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-4ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်အမ်းငွေရယူခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (0)3 မှတ် (1)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 42 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် ဂီတဆည်းဆာဧည့်ခံပွဲကြီးမှ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားသည့်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းဖြင့် မိမိတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်ရသောသူများနှင့် တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များကိုပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်ပါပြီ။တမူထူးခြားပြီး အရသာရှိသော ကမ္ဘာကျော်ချိစ့်များနှင့် အကောင်းဆုံးဝိုင်များကို ကျွန်တော်တို့ Veranda Bar မှနေ၍၀န်ဆောင်မှုပေးနေသည့်အတွက် မိမိတို့တန်ဖိုးထားရသောမိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွ သုံးဆောင်ရင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသောညနေခင်းတစ်ခုကို ယခုပင်ရယူလိုက်ပါ။ စွဲမက်ဖွယ်အရသာများနှင့် အမျိုးစုံသောဝိုင်များကို နမူနာအနေဖြင့်ထားရှိပေးထားသည့်အတွက် စိတ်တိုင်းကျမြည်းစမ်းပြီးနောက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောအရသာကို ရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာပေါင်းစုံမှချိစ့်ပေါင်း ၃၀ ကျော်၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖုတ်ယူထားသော ပေါင်မုန့်များနှင့် အရသာအင်မတန်ကောင်းမွန်သော နူးညံ့အိစက်လှသည့်အသားဟင်းလျာများကို တွဲဖက်စားသုံးရင်း သာယာငြိမ့်ညောင်းသောစန္တရားဂီတသံစဉ်တွင် စီးမျောခံစား အနားယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရာများWine and Cheese SoiréeDate : Thursday 17th August 2017Time : 6pm - 9pmPlace : Veranda BarCall 01-544434, 09970140004 if you find any difficulties in placing orderFree Delivery all over Myanmar!ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Wine and Cheese Soirée (17th August, Thursday) SKURO399OT18SJP4NAFAMZ မော်ဒယ်လ်Wine&Cheese17august Weight (kg)0.0001 ပြန်လည်ပို့ဆောင်၍မရပါ